Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Sweden oo Diiday Xadgudubka Shirkadaha Shiinaha Ka Wadaan Ogadenya
Maanta oo Sabti ah taariikhduna ku beegnayd 20-11-2014 ayaa waxaa ka dhacay dalka Sweden gaadh ahaan Caasimada Stockholm Mudaharaad Safaarada Chinaha horteeda. Banaanbaxan oo loogas oo hor jeeday arimaha xad gudubka ah ee ay dawlada Shiinaha ka wado gudaha Ogadenia oo ay ka midka yihiin soo saarida shidaalka si shacabka loogu dhibaateeyo.
Waxaa fagaaraha uu ka dhacayay mudaharaadka isugu yimid dad aad u cadhaysan, oo aad ooga gadoodaday gabood falada ay ku hayso dawlada China dalka Ogadenia ee dulmiga TPLF wali ku hoos jira, iyada oo ay China ka mid tahay dawladaha waaweeyn ee awooda ku leh caalamka. Waxay dadka banaabaxayay ay ku ceebiyeen sida tugaysiga ah ee shirkadaha Shiinaha ay ugusoo dhuumaalaysanaan qayraadka Ogadenia !
Dhanka kale Mudaharaadayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo halku dhagoodu yahay China inay joojiso dhaca shidaalka Ogadenia, sidoo kale inay joojiso taageerada iyo garabka ay sii nayso taliska dhiigya cabka ah ee xukuumad ku sheegta fadhigeedu yahay Addis-Ababa.
Sikastaba ha ahaatee Mudaharaadka oo bilowday abaaraha 1:00pm duhurnimo ayaa si habsami ah kusoo gabagaboobay saacadu markay ahayd 4:00pm.